ဇူလိုင်လ 2017 |2၏စာမျက်နှာ 89 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 2)
ရာထူး: အသံဘုတ်အဖွဲ့အော်ပရေတာကုမ္ပဏီ: Intervex7Production တည်နေရာ: တစ်အသံရောနှောအဖြစ် Liberman အသံလွှင့်မှာကို San Gabriel, CA အမေရိကန်လုပ်ငန်း (A1) ။ ဒါ့အပြင်ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အ Imdb စစျဆေးနိုငျခရက်ဒစ်များစီးပွားဖြစ်, အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နှင့်စတာတွေလုပ်နေတာ A1 အဖြစ်အလွတ်တန်းသတင်းထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယောဘသည်အမျိုးအစား: အချိန်ပြည့်ယောဘသည်တည်နေရာ: ကို San Gabriel,, CA လိုအပ်ပါသည်ပညာရေး: တွဲဘက်လိုအပ်ပါသည်အတွေ့အကြုံကို: ဆယျ့နှစျ:2နှစ်ပေါင်းတောင်းဆိုနေတဲ့ဘာသာစကား: အင်္ဂလိပ် / စပိ ...
ရာထူး: အင်ဂျင်နီယာ Supervisor ကုမ္ပဏီ: Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုတည်နေရာ: Culver စီးတီး, CA အမေရိကန်တင်းနစ် Channel ကိုအားကစားနှင့်တင်းနစ်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှစ်ခုလုံးမှဆက်ကပ်အပ်နှံတစ် 24 နာရီထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အွန်လိုင်း streaming များကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်ကကျယ်ပြန့်-အထိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်းနစ်အသိုင်းအဝိုင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ တင်းနစ် Channel ကိုထိပ် MSOs အဖြစ် DirecTV အားဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးသယ်ဆောင်နှင့်နေသည် ...
BCC - အင်ဂျင်နီယာ Operarions ကြီးကြပ်ရေးမှူး
ရာထူး: BCC - အင်ဂျင်နီယာ Operarions Supervisor ကုမ္ပဏီ: Turner တည်နေရာ: အတ္တလန်တာ GA အမေရိကန်တာဝန်: အင်ဂျင်နီယာစစ်ဆင်ရေး၏ဒါရိုက်တာမှဒီအနေအထားအစီရင်ခံစာများနှင့်သုံး 24 /7ဆိုင်းအလှည့်မဆိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ရက်ပြောင်းကုန်ပြီတာဝန်များမှနေ့ကိုကြီးကြပ်ဖို့ထို့အပြင်လူတစ်ဦးချင်းစီသက်ဆိုင်ရာပြောင်းကုန်ပြီအပေါ်တစ်ဦးအဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်မည်, assign ပါလိမ့်မယ် ...
Web Design နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ International
ရာထူး: Web Design နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ International ကုမ္ပဏီ: Dynamynd, Inc တည်နေရာ: Scottsdale AZ အမေရိကန် Dynamynd Inc ကိုသုတေသန, ဒေတာ analysis နှင့်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုကြောင်း Scottsdale, AZ မှာတည်ရှိပါတယ်အနေနဲ့ဆန်းသစ် start-up ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO နဲ့တည်ထောင်သူ, ကေသီ Kolbe လူတိုင်းအညီအမျှ, ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနား, ဖန်တီးမှုကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အခြားအအကဲဖြတ်မတူဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာတ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုမဟုတ် ...
ရာထူး: Manager ကို, ဓါတ်ပုံပညာနှင့်မာလ်တီမီဒီယာကုမ္ပဏီ: ဟူစတန်တည်နေရာတက္ကသိုလ်: ဟူစတန် TX အမေရိကန်အဆိုပါမန်နေဂျာဓါတ်ပုံပညာနှင့်မာလ်တီမီဒီယာ, အစီအစဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လိုအပ်အဖြစ်တက္ကသိုလ်တိုးနှင့် University ဆက်ဆံရေးနှင့်သူတစ်ပါး၏တပ်မအားလုံးကိုဓာတ်ပုံနှင့်မာလ်တီမီဒီယာညွှန်ကြားနေသည်။ ဒီအနေအထားမျိုးစုံဌာနများတက္ကသိုလ်ကိုဖြတ်ပြီးန်ထမ်းများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများကူညီနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Duty ထုတ်လုပ်တက္ကသိုလ်ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် ...
Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဗီဒီယို Editor ကို
ရာထူး: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဗီဒီယို Editor ကိုကုမ္ပဏီ: Livevox, Inc မှတည်နေရာ: ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA အမေရိကန်အကျဉ်းချုပ် / ရည်ရွယ်ချက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျနော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်း ?? s ကိုရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖော်ပြသောလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ် post တစ်ခုအလုပ်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဗီဒီယိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့တကမ္ဘာလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်း featuring နှင့်တစ် Post-ထုတ်လုပ်မှု / တည်းဖြတ်အနုပညာရှင်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ် iPhones အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုများတစ်ဦးစုဆောင်းမှုများ ...
ဘရော့ဒ်ဝေးဗီဒီယိုရဲ့ဆူး Pelino Fame induction အခမ်းအနား၏ 2017 ရော့ခ်ပြီးတော့ Roll Hall ကအဘို့အ Primetime သူဟာ Emmy Award ဆု Nomination လက်ခံတွေ့ဆုံ
New York, ဇူလိုငျ 31, 2017 - အဆိုပါရုပ်မြင်သံကြားအကယ်ဒမီဘရော့ဒ်ဝေးဗီဒီယို၏ဆူး Pelino ထူးချွန်အသံတစ်ဦးကအရောင်းသွက်စီးရီးဒါမှမဟုတ်အထူးများအတွက်ရောစပ်များအတွက်အသင်းဖော်စပ်အသံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည့်အဘို့, 69th နှစ်ပတ်လည် Primetime သူဟာ Emmy Awards ဆုအတွက်လျာထားခံရကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် 2017 ရော့ခ်ပြီးတော့ Roll Hall ကအပေါ်အသံထုတ်လုပ်မှုအသင်းမှချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် ...
မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံတူဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး - အရောင်းနှင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံတူဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး - အရောင်းနှင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ: ShootDotEdit တည်နေရာ: Vista က, CA ကိုအမေရိကန်သင်လက်ရှိမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံတူရိုက်ကူးနေပေမယ့်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပိုကောင်းရရှိရန်ပေးဆောင်ရ LOVE မလဲ သငျသညျတခုထူထောင်ဓာတ်ပုံဆရာ Are သင်မူကား, LOVE တစ်ခုခုလုပ်နေတာတစ်ပတ်ကာလအတွင်းသင့်ဝင်ငွေမှထည့်သွင်းဖို့ရှာဖွေနေပါသလား သို့မဟုတ်သင်အသစ်တစ်ခုကိုဓာတ်ပုံဆရာများမှာ ...